Daawo: Raisul wasaare kheyre oo bilaabay la xisaabtanka wasiirada maanta meqa wasiir ayuu la xisaabtamay?? – Kismaayo24 News Agency
Daawo: Raisul wasaare kheyre oo bilaabay la xisaabtanka wasiirada maanta meqa wasiir ayuu la xisaabtamay??
by Tifaftiraha K24 21st May 2017 056
Isla xisaabtanku waa hanan la isku raacsan yahay in uu laf dhabar u yahay qabsoomidda shaqo wanaagsan isla markaana abuurta dowladda wanaagsan iyo kalsoonida dowladda iyo Shacabka.
Ra’iisul wasaaraha Xukumadda Mudane Xasan Cali kheyrre oo ka duulaya aragtidaasi ayaa kulamo isla xisaabtan oo fool ka fool ah waxa uu la yeeshya xubnaha golaha wasiirradda si looga dhabeeyo Barnamijka dowladda ee Nabad iyo nolal.
Mudanr Xasan Cali Kheyrre Ra’iisul wasaraha xukumadda federaalka Soomaaliyae ayaa soo gaban gabeyey maanta wajiga 1aad ee qorshaha uu kula xisaabtamayo wasiirradiisa tasi oo soo billaabatay Maalintii shalay ahayd, iyadoo wasiir kasta uu usoo gudbiyey qorshe howleedka wasaraddiisa ee 100 maalin, taas oo noqon doonta tan wasiir kasta lagula xisabtami doono isla markaana lagu qiimayn doono wax qabadkiisa marka ay dhamaato boqolka Maalin. Sida uu warbaahinta qaranka u sheegay wasiiru dowlaha xafiiiska Ra’iisul wasaaraha Mudane Cabdullahi Xamud.
Qorshaha Ra’iisul wasaaraha xukumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali kheyrre uu kula xisaabtamayo xubnaha golahiisa wasiirradda ayaa ah mid ku Cusub hannanka dowadanimada dalkeenna. taas oo meesha ka saaraysa Musuq maasuq iyo maamul xumada oo haddii ay dhacdo dhaawacaysa hannanka dowladnimo ee dalkeenna, isla markana sare u qaadaysa kalsoonida iyo muraalka shacabka Soomaaliyeed.
DEG DEG: Diyaaradda turkish airline oo maanta dhibaato xoogan ay ku qabsatay garoonka aadan cadde
Daawo: Madaxweyne farmaajo oo riyadh uga qeyb galay shirka hogaamiyeyaasha dalalka islaamka iyo mareykanka
Ururka Iskaashiga Islaamka Oo War ka soo Saaray Qaraxyadii ka dhacay Muqdisho
Sakariye Sakariye 25th February 2018 25th February 2018
FALANQEYNTA Kulanka Xiisaha Badan Ee Kooxaha Juventus Vs Inter Milan (Maxay Saxaafadu Kulankan Ka Tiri???)
Tifaftiraha K24 18th September 2016
Faah Faahinta: Qaraxyo waaweyn oo Ruxay Caasimadda Muqdisho iyo Weeraro qorsheysan oo la fashiliyay